Showing २४१-२५० of १,१४२ items.
पाकिस्तानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीस हजारभन्दा बढी
एजेन्ससी । पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीस हजारभन्दा बढी भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार देशभरी कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीस हजार ९४१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार ४७६ जना थपिएको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । यो सङ्ख्या अत्यन्त धेरै भएको उनीहरुको भनाइ छ । सङ्क्रमितमध्ये सवैभन्दा धेरै पञ्जाव प्रन्तमा रहेका छन् । त्यहाँ एघार हजार ५६८ जना सङ्क्रमित भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी एघार हजार ४८० जना सिन्ध प्रान्तमा, चार हजार ६६९ जना खैबर पख्तुङ्ख्वामा, दुई हजार १७ जना बालुचिस्तानमा, ६७९ जना इस्लामावादमा, ४४२ जना गिल्गित बाल्टीस्तानमा र ८६ जना पा
लण्डन । बेलायतमा श्रमिकहरूमा भाइरस सङ्क्रमण र मृत्युको बढी जोखिम बेलायतका विभिन्न स्थानमा प्राविधिक रूपमा दक्ष कामदारको तुलनामा निम्न कौशल कामहरूमा खट्ने श्रमिकमा कोरोना भाइरसको बढी जोखिम रहेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार बताएको छ । तथ्याङ्कमा श्वेत नागरिकको तुलनामा अश्वेत नागरिकको कोरोना भाइरसका कारण बढी मृत्यु भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आइतबार निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रका कामदार काममा फर्केर आउन सक्ने तर कार्यालयका कर्मचारीले घरबाटै काम गर्न आइतबार गरेको आग्रहपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले उक्त तथ्याङ्कलाई महत्वसाथ सार्वजनिक गरेको हो । निर्माण र उत्प
काठमाडाैं / राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आगामी बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले कोभिड–१९ रोकथाम, विपत् न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने , “आम किसानको रक्षा गर्दै कृषि क्रान्तिमा आधारित बजेट हुनुपर्छ, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्दै उत्पादन गर्नु
नयाँ दिल्ली । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंह अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आइतबार राति नै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस् ऐम्समा भर्ना गरिएको बताइएको छ । उनी अस्पताल भर्ना भएको उक्त अस्पतालले पुष्टि गरेको छ । सो समाचारको भारतीय काँग्रेसले पनि पुष्टि गरेको छ । छाती दुखेर असहज महसुश भएपछि उनलाई भर्ना गरिएको अस्पतालले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहलाई ऐम्स अस्पतालको मुटुरोगसम्बन्धी समस्या देखिएकोले उक्त अस्पतालको मुटु रोग
धरान । स्पेनको चर्चित ‘लालिगा’ मा सहभागी क्लबमध्ये ५ खेलाडीलाई कोरोना भएको पुष्टि भइरहेकै बेला स्पेनको अर्को चर्चित क्लब बार्सिलोनाका खेलाडी भने अभ्यासमा फर्किएका छन् । बार्सिलोनाका खेलाडीहरू ५६ दिनपछि दैनिक अभ्यासमा फर्किएका हुन् । कोरोनाका कारण पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको फुटबलमा गतिविधिहरू सुरु हुन थालेका छन् । स्पेन सरकारले यसैसाता क्लबहरूलाई अभ्यासको अनुमति प्रदान गरेपछि बार्सिलोनाका खेलाडीहरू मैदानमा देखिएका हुन् । लिग सुरु गर्ने तयारी भएको छ । सोही अनुरूप बार्सिलोनाका खेलाडीहरू अभ्यासमा फर्किएका हुन् । पहिलो दिन कप्तान लियोनल मेसी, एन्टोनियो ग्रिजम्या, लुइस सुआरेज, मार्क आन
धरान । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह अचानक बिरामी परेका छन् । अचानक बिरामी भएपछि आइतबार राति उनलाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा भर्ना गरिएको छ । उनलाई कार्डियो थोरेसिक वार्डमा भर्ना गरिएको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जानकारी गराएको छ । उनलाई छातीमा समस्या देखिएपछि भर्ना गरिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह कंग्रेसका बरिष्ठ नेता पनि हुन् । ८७ वर्षीय सिंहलार्य रातको ८ः४५ बजे भर्ना गरिएको हो । एम्सका कार्डियोलोजी विभागका प्रा.डा. नितिश नायकले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतमा सन् २००४ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका कंग्रेसका बरिष्ठ नेत
इटालीमा काेराेनाका कारण सात लाख बालबालिका पर्याप्त खानाबाट वञ्चित
इटलीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण करिब सात लाख बालबालिकाहरू पर्याप्त भोजनबाट वञ्चित भएको इटलीको किसानहरूको प्रमुख संगठन कोल्डरेट्टीले आइतबार बताएको छ । संगठनका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीका कारण स्कूल बन्द भएपछि गरीब परिवारका केटाकेटीहरूले विद्यालयको क्यान्टिनले दिने लन्चमा पहुँच पाउन नसकेको र स्वास्थ्य सङ्कटको कारण आर्थिक कठिनाइ झनै नराम्रो भएको कारण केटाकेटीको आवश्यक न्यूनतम आहारामा निकै कमी भएको हो । “इटलीमा दुध वा खाना लिन सहयोग चाहिने १५ बर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूको सङ्ख्या सात लाख रहेको छ,” कोल्डरेट्टीद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो सङ्कटले गरिबलाई थप
कोरियामा कोरोनाको फेरि त्रास, क्लब र बार बन्द
सियोल । कोरोना महामारीको त्रास बढेको भन्दै दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलका सबै क्लब र बार बन्द गर्न सरकारले आदेश दिएको छ । कोरियाली राष्ट्रपति मून जाए–इनले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो सिलसिला मुलुकमा देखिन थालेकाले त्यसप्रति सचेत रहन देशबासीलाई अपिल गर्नु भएको छ । भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । तर राजधानी सियोलका मेयरले शनिबार रात्रिजीवनका लागि निकै प्रख्यात मानिएको इताओनमा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरु भेटिएसँगै नयाँ आदेश जारी गर्नु भएको छ । गत सप्ताहान्तमा इताओनका पाँच वटा क्लब र बारमा पुगेका एक २९ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखि
सउल । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने देश दक्षिण कोरिया भनेर सर्वत्र चर्चा हुनुका साथै यहाँको दैनिकी सामान्य हुँदै गरेका बेला यहाँ पुनः सामूहिक कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो समय राजधानी सउलको इथेवन बजारबाट सामूहिक सङ्क्रमण भएको देखिएको हो । आइतबार ३४ नयाँ सङ्क्रमित देखापरेको दक्षिण कोरिया रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । यो सङ्ख्या अप्रिल ९ पछिको सबैभन्दा धेरै हो । अन्दाजी २९ वर्षीय एक कोरोना भाइरस सङ्क्रमित इथेवन बजारको विभिन्न रात्रि क्लबहरूमा पुगेपछि त्यहीँबाट सङ्क्रमण शुरु भएको हो । उक्त सङ्क्रमित व्यक्ति मे १ र २ तारिखमा विभिन्न रात्रि क्लब र बजारमा पुगेपछि उसको सङ्
विश्वभरि ४१ लाख भन्दा बढि मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण
ब्लाष्टखबर । विश्वभरि ४१ लाख भन्दा बढि मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएकाे छ। जसमा १४ लाख ४६ हजार बढि काेराेना संक्रमित निकाे भएर घर फर्केका छन् भने, २ लाख ८० हजार भन्दा धेरैले यस भाइरसकाे संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेकाे छन् । हाल विश्वमा २३ लाख ९० हजारकाे हाराहारीमा काेराेना संक्रमितहरूकाे उपचार भइरहेकाे छ । उपचाररत संक्रमीतहरू मध्याे ४७ हजार भन्दा बढिकाे अवस्था गम्भिर रहेकाे कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्दै आएको वल्ड मिटरले जनाएकाे छ । यस भाइरसले अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेकाे छ । अमेरिकामा मात्र विश्वभरि भएको मृत्युमध्ये एकतिहाइ